November 10, 2016 – Waxaa Xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ku soo badanaya, dhalinyrada Soomaalida ee kamidka noqonaya gaangistariinta kooxda Super Power.
Kooxdan Super-Power oo Boobka iyo dhaca u geysta Soomaalidda ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa u badan dhalinyaro ku soo saaqiday Qurbaha oo badankoodu ay nolosha ka dhaceen, lamana yaqaan Waalidiintii dhalay iyo sababta ay u dayaceen oo ay Dhalinyaradan uga tageen.
Markii qaar kamid ah dhalinyaradan ay waayeen Waalidiin ka warhaya xaaladooda, bilaabay inay isbaaro iyo boob kula kacaan Soomaalida ku nool xaafadaai.
Dhalinyaradan gaangisteriinta ah ayaa inta u dhaxaysa Xaafadda Jaam-Steet iyo Masjidka Hidaaya ee Islii badanaa Dadka masaakiinta ah ku baarta, waxaana ay mararka qaar ay dadka u gaystaan dhaawacyo Halis ah.
Booliska dalka Kenya ayaa hadda ka hor weerar xoog leh ku qaaday dhalinyaradan Gaangisteriinta ah ee dadka dhaca, waxaana ay markaasi ka dileen horjoogeyaal ka tirsanaa kooxdaasi.
Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aad uga cabsada dhalinyaradan dadka weerara, waxaana qof weliba uu iska ilaaliyaa inuu magacooda soo hadal qaado marka uu la hadlayo warbaahinta muuqaalka ah ee la iska arko.
November 10, 2016 tuugahaladilo2015